Ciidanka bilayska, daraawiishta & ilaalada xaafadaha oo hawlgallo amni ka fuliyey Galkacyo. – Radio Daljir
Ciidanka bilayska, daraawiishta & ilaalada xaafadaha oo hawlgallo amni ka fuliyey Galkacyo.
Galkacyo, Dec 13 – Hawlgallo ballaaran oo lagu xoojinayo ammaanka magaalada Galkacyo ayaa labadii habeen ee ugu danbeeyey si xawli ah uga socday gudaha iyo dacallada magaalada Galkacyo.
Hawlgalladaan oo ay wadeen ciidanka amniga oo iskugu jira bileyska, dawaariish iyo bileys xaafadeed dhawaan la sameeyey ayaa waday habeennadii ugu danbeeyey roondayn lagu xaqiijinayey amniga magaalada Galkacyo oo dhawr jeer ay ka dhaceen falal abaabulan oo dadka lagu laayey.
Ciidanka oo gaadiid iyo lugba isticmaalayey isla markaana lagu arkayey dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo ayaa baaritaanno dheeraad ah ku samaynayey dadka iyo gaadiidka is ticmaalaya waddooyinka, waxayna baro koontarool oo cusub ka samaysteen inta badan is-gooysyada magaalada dhaxdeeda ku yaalla.
Hawlgalladaan oo in muddo ahba socday ayaa la sii xoojiyey labadii habeen ee ugu danbeeyey kadib markii nin hubaysani uu habeen hore weerer ku qaaday niman culimo aw-diin ah oo xilligaasi ku sii jeeday masaajid ay ku tukan lahaayeen, waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay labo ka mid ahaa culimadii la weeraray.
Ninka weerarkaasi gaystay ayaa isku dayey in uu baxado isagoo rasaas oodda uga qaaday dadkii ka agdhawaa goobtii falka weerar ka filiyey, hase ahaatee ciidanka bileyska ayaa toogtay ninkaas, waxaana rasaas uu riday ku dhaawacmay askari ka tirsanaa ciidanka ammaan oo xilli danbana u geeriyooday dhaawicii soo gaaray.
Baaritaanno bileysku ay falkaasi weerer ku hayeen ayaa la sheegayaa in lagu xaqiijiyey waxyaabo badan oo ku saabsan dadka iyo deegaanka uu ka soo jeedo ninka weererkaasi qaaday iyadoo sidoo kalana la helay caddaymo muujinaya sababta weerarkaasi ka danbaysay.
Taliyaha ciidanka bileysk gobolka Mudug Col. Muuse Xasaasi, ayaa idaacadda Daljir u sheegay xilli dhaw in ay soo bandhigi doonaan natiijiiyinkii ka soo baxay baariraankii bileysku ay wadeen oo ku saabsanaa weerarka ninkaasi hubaysani uu qaaday.
Ma ahan markii ugu horraysay oo ay ciidanka ammaanku toogtaan ama gacanta ku dhigaan dambiile baxsad ah oo danaya in uu ka fakado falka uu fal danbiyeedka ka gaystay.